Kanzuru yeHarare Yotorera Vagari Vane Zvikwereti Midziyo
Kukadzi 16, 2012
Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiomera vagari vemuguta reHarare vari kurarama hupenyu hwepasi zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nekanzuru yeguta ravo rekubata midziyo yevagari vane zvikwereti, iyo ichazotengeswa senzira yekuti guta iri riwane mari yaro.
Vagari vazhinji vanoti danho iri rinongotorerwa varombo kana kuti vasina masimba ezvematongerwo enyika, sezvo vakawanda vezvematongerwo enyika vaine zvikwereti asi vasiri kuvharirwa mvura kana kutorerwa midziyo yavo.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare, reCombined Harare Residents Association, CHRA, razivisa kuti kusvika pari zvino vagari vemumusha weMabvuku vanosvika makumi matatu, vabatirwa midziyo yavo nezvikonzi zvakatumwa nekanzuru sezvo vaine zvikwereti zvemitero nemvura.
Ukuwo, gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma, svondo rino vakaudzawo komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti kambani yemagetsi yeZesa iri kushushikana zvikuru nemamwe makurukota pamwe nevamiriri vedare reparamende nevamwe vakuru muhurumende vasiri kubhadhara magetsi, izvo vakati zviri kuita kuti Zesa irasikirwe nemari yakawanda zvikuru, uye itadze kutenga magetsi kubva kunze.
Asi vakuru vakuru ava vanonzi havasi kudzimirwawo magetsi sezviri kuitirwa vamwe vepasi vanenge vaine zvikwereti, izvo zvoita kuti vanhu vabvunze kuti mitemo iri kushandiswa iri kutarisa here kuti munhu abuda mumba maani.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare, reCombined Harare Residents Association, CHRA, VaMfundo Mlilo, vaudza Studio7 kuti sangano ravo rakwidza nyaya yekutorerwa midziyo iyi kumagweta anorwira kodzero dzevanhu, uye vachaona kuti vangatorera kanzuru iyi matanho api.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe National Youth Council, VaLivingstone Dzikira, vatiwo vanoona sekunge dambudziko riri pakupinda kwakaita vamwe vanhu vasina dzidzo yakakwana munyaya dzezvematongerwo enyika, avo vave kufunga kuti vawana mukana wekuunganidza nawo upfumi vasingaiti zvido zvevagari vemuguta.
Hurukuro naVaMfundo Mlilo pamwe naVaLivingstone Dzikira